GALMADA SIDEE LOOGA DHARGAA MACAAN WAAYEE. - iftineducation.com
GALMADA SIDEE LOOGA DHARGAA MACAAN WAAYEE.
iftineducation.com – Sideedaba hadii aynu nahay noole waxa aynu leenahay baahi badan oo u baahan in wax laga qabto. Baahida aan qabno ayaa sida jaranjarada ukla saraysa. Midiba mida ay ka adagtahay ayay ka horeysaa.
BARO:Hababka ugu Casriyeeysan ee Xaga Galmada Casriga ah+ sida qaylada hablaha Yar Yar Looga Keeno.